के भेट्लान् त प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई ! - LoktantrikNews - अग्रगामी खबरको रफ्तार
के भेट्लान् त प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई !
३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फोन गरेर भेट्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान प्रचण्डलाई फोन गरेर तत्कालै भेट्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएपछि आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल गरेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने सम्भावना छ ।
नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिको आकस्मिक बैठक बस्दै